Ogaden News Agency (ONA) – Shacab u xidhnaa cadawga oo laga sii daayay Wacays-qodle oo ka tirsan gobolka Dhagaxbuur
Shacab u xidhnaa cadawga oo laga sii daayay Wacays-qodle oo ka tirsan gobolka Dhagaxbuur
Posted by ONA Admin	/ October 15, 2012
Wararka nagasoo gaadhaya Xarunta dhexe ee JWXO ayaa sheegaya Howlagalo qorshaysan oo ay qaadeen Cutubyo katirsan NH/CWXO kaasi oo ay kusoo furteen maxaabiis farabadan.
13/10/2012 Ciidamada Gumaysiga Ethiopia oo howlgal ay ku dibaataynayeen dadka shacabka ah ka waday meesha lagu magacaabo Wacays-qodle oo katirsan Deegaanka Huuraale ee Gobolka Dhagaxbuur halkaasi oo ay dad farabadan xabsi ciqaabeedka deegaankaasi ka buuxiyeen ayaa waxaa Howlgal qorshaysan kusoo qaaday Cutub katirsan NH/CWXO waxaana Askartii gumaysiga ee deegaakaasi dhibaatada ugu gaysanayey dadka shacabka ah loogu gaystay khasaare lixaadle iyadoo lagala wareegay saldhigayadii ay ku lahayaaheen deegaaka Wacays-qodle waxaana laga dilay askartaasi 5 Askari iyadoo dhaawac farabadana uu jiro
NH/CWXO ayaa waxay jeel ciqaabeed ku yaalay deegaankaasi kasii daayeen dadwayne aad ufarabadan waxaana ay deegaankaasi markii ay kacarareen Askartii gumaysigu ka qaateen saldhigii ay wayaanuhu kacarareen qalab milatari oo farabadan.
Isla 13/10/2012 Deegaanka lagu magacaabo Qodaxle oo katirsan Dagmada Galaalshe ayaa sido kale waxay askartii wayaanaha ee joogtay deegaankaasi ka bilaabeen ciqaab wadareed ay ugaysteen dadkii deegaankaasi daganaa waxaana ay xabsiyada ka buuxiyeen dad farabadan. Arintaasi ayaa markii ay dhacday waxaa howlgal qorshaysan oo lagu badbaadinaayo dadka shacabka ah kusoo qaaday saldhigyadii gumaysigu kulahaa deegaankaasi cutub katirsan NH/CWXo waxana gabi ahaanba lawareegeen Deegaanka Qodaxle halkaasi oo kaga dileen askartii wayaanaha 5 askari waxaana lagaga dhaacayay 7kale.
NH/CWXO ayaa waxaay halkaasi kasii daayeen maxaabiis farabadan oo ay askarta Wayaanuku ku ciqaabayeen deegaankaasi. Markii ay lawareegeen NH/CWXO saldhigayadii gumaysiga ee ay ku lahaayeen Deegaanka Qodaxle ayaa waxay halkaasi kula wareegeen hub iyo saanadan milatari oo farabadan.